Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း)
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ကဘာလဲ။
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါ ဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ခေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါအခြေအနေကြောင့် ကလေးဟာ စာသင်ကြားရာမှာ ခက်ခဲသွားနိုင်ပြီး အချို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေဟာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဖြစ်သွားပါတယ်။ သို့သော် သေချာဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ လူတွေဟာ ကျန်းမာစွာ နဲ့ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ဆိုတာ အဖြစ်အများဆုံး မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိတဲ့သူတွေဟာ မွေးကတည်းက ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
• အခြားသူများနဲ့ ယှဉ်လျှင် အရပ်ပု၍ ကိုယ်အလေးချိန ်လျော့ကျနေခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေး မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်ပွခြင်း၊ အန်ခြင်း စတဲ့ဝမ်းဗိုက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကြုံတေ့ွရခြင်း၊
နှလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လက်ချောင်းများ ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်ခြင်း၊
အသက်ရှူချိန်၊ တစ်စုံတစ်ခုစားချိန်၊ တစ်စုံတစ်ခုပြုချိန်တွင် အသက်ရှူ ရ ခက်ခဲလာခြင်း
သူတို့လုပ်ဆောင်နေကြ အရာများကိုမလုပ်ဆောင်တောဘဲ ကွဲပြားစွာ ပြုမူနေမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်။ ကလေးမှာ စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကျခြင်းစတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကို ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခါမှာလည်း ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပုံမှန်ခန္ဓါကိုယ်မှာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခရိုမိုဆုန်း ၄၆ခု ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဝက်ဟာ အမေဆီကလာပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာ အဖေဆီကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ခု မြောက် ခရိုမိုဆုန်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကွဲပွားမှုကြောင့် ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါခံစားရသူတွေမှာ ခရိုမိုဆုန်း ၄၇ ခု ရှိပါတယ်။ ဒီ၂၁ ခုမြောက် ခရိုမိုဆုန်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကွဲသွားတဲ့အတွက် တစ်ခုပိုလာသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလိုပိုလာတဲ့ ခရိုမိုဆုန်းကြောင့် ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ မကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းများကို ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အသက်ကြီးမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အသက်ကြီးလာလေလေ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါ ပါလာတဲ့ ကလေးမွေးဖွားဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၅နှစ်နဲ့ အထက်မိခင်တွေမှာ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖွားနိုင်ခြေမြင့်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါရှိတဲ့ ကလေး မွေးဖူးတယ်ဆိုလျှင် နောက်မွေးတဲ့ကလေးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
အမေနဲ့ အဖေက ဆင်းသက်လာတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါအချို့ကို ၎င်းတို့ရဲ့ ကလေးတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းကလေးတွေမှာ လည်းဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အမေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကလေးမှာ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါ ရှိမရှိကို ဆန်ကာတင်စစ်ဆေးခြင်း နဲ့ အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြင့် စမ်းသပ်ပြီး အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာလည်း သင့်ကလေးရဲ့ သွေးနာမူနာကို ယူပြီး ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ နောက်ထပ် ၂၁ခု မြောက်ခရိုမိုဆုန်း ရှိနေလားဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Down Syndrome (ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် မိဘတွေက တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး ဒီအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်တို့ ကလေးရဲ့ဘဝအစက စပြီးကူညီပေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း ရောဂါရှိနေပြီဆိုရင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ထံမှ အကူအညီများရ ယူဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့၌ တိုးတက်လာစေရန်အတွက်လည်း အားပေးကူညီသင့်ပါတယ်။
Down syndrome. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down- syndrome/basics/coping-support/con-20020948. Accessed July 21, 2016.
Down syndrome. http://www.webmd.com/children/tc/down-syndrome- prevention. Accessed July 21, 2016.
Down’s syndrome. http://www.nhs.uk/Conditions/Downs-syndrome/Pages/Treatment.aspx. Accessed July 21. 2016.Down syndrome. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down- syndrome/basics/coping-support/con-20020948. Accessed July 21, 2016.